हङकङ जस्तो चीनाजातिको मोनो संस्कृति र भाषाको ९४ प्रतिशत हावी भएको ठाउँमा नेपाली मातृभाषा संरक्षण गर्छु भन्नु त्यति सहज पटक्कै छैन । अनेक बाँधा अड्चन एवं चुनौतीहरु आइपरेका छन् । म कयौं पटक नेपाली पढाउन खोज्दा निराश बनेको छु ।
मातृभाषा विशेषज्ञ विद्वानहरु सल्लाह दिन्छन – मातृभाषा (फस्ट ल्याङ्ग्वेज) घरभित्रबाट शुभारम्भ हुन्छ । त्यसैले छोराछोरीहरुलाई मातृभाषाालाई गहिरो प्रेम गर्न सिकाउनु पर्दछ । मातृभाषामा बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको सोचविचारहरु राम्ररी अभिव्यक्त गर्न सिकाएमा उनीहरुको व्यक्तित्व विकासमा ठूलो सघाउँ पुग्दछ ।
हङकङमा बस्ने नेपालीहरुको पृष्ठभूमि विभिन्न जातजाति वा जनजाति भएता पनि नानीहरुको मातृभाषा चाँहि नेपाली हो । किनभने घरमा आमाबाबाहरुले प्रयोग गर्ने भाषा नेपाली भएका कारण नानीहरुको मातृभाषालाई नेपाली मान्न सकिन्छ ।
हामीले प्रत्येक दिन नेपाली भाषा पढने वातावरण तयार गर्न धैर्यता र लगणशीलता चाहिन्छ । स्वतन्त्ररुपमा पढन लेख्न नसकेसम्म सहयाता दिनुपर्दछ । जो आभिभावकहरुले आफ्नो बाल्यकालको कथाहरु, घरदेशको कथाहरु बारम्बार सुनाउँछन उनीहरु त्यस्ता कथा, घटनाक्रमहरुमा अभिरुची वृद्धि भई मौखिक र शब्दावली क्षमता वृद्धि भएको हुन्छ र तपाईको नानीहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ।
यदि नानीहरुले मातृभाषा सिकिरहेका छन् भने उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् । नेपाली भाषाको चलचित्रहरु, टेलीसिरियलहरु देखाउनु, नेपाली भाषाका पत्रपत्रिकाहरु, पुस्तकहरु, गीतसंगीतहरु, बालबालिका सम्बन्धी पुस्तकहरु घरमा प्रशस्त राख्नुपर्छ । बालबालिकाहरुलाई जर्नल लेख्न उत्प्रेरणा दिनुहोस् । मातृभाषाको प्रयोग गरेर कथा, कविता लेख्न उत्प्रेरणा दिनुहोस् ।
सम्भव भएमा आफ्नो नानीहरुलाई बारम्बर घरदेशहरु घुमाउँनुहोस् । सांस्कृतिक गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँनुहोस् । उनीहरुमा सामाजिक भावना विकास हुन्छ । आफू र आफ्नो समुदायलाई नजीकबाट नानीहरुले पहिचान गर्न सक्नेछन् । विशेषगरी नेपाली चाडपर्वहरुको बारेमा यथेष्ट जानकारीहरु दिनुहोस् । चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ भने राम्ररी ध्यान दिएर उनीहरुकै लागि भएपनि घर सजाउँनुहोस् । आफूले मनाउने चाडपर्वहरुको बारेमा राम्ररी बताउँनुहोस् ।
बालबालिकामा मातृभाषाको विकासले एक असलव्यक्ति बन्नसबैभन्दा ठूलो भूमिका हुनेगर्छ । त्यसैले नेपाली समाजका अगुवाहरुले बालबालिकाहरुलाई मातृभाषा सिकाउने अभियान थाल्नु पर्छ ।
एक विद्ववान शिक्षक हुरिसा गुवरचिन मातृभाषाको महत्वका बारेमा लेख्छन् – "Mother language hasavery powerful impact in the formulation of individual. Our first language, the beautiful sounds of which one hears and gets familiars with before being birth while in the womb has such an importance role in shaping thoughts and emotions."
अर्का महामानव नेल्सन मण्डेला मातृभाषाको महत्वका बारेमा भन्नुहुन्छ –"If you talk toaman inalanguage he understands that goes to his head. If you talk to him in his language that goes to his heart."